Etazonia: Tsy Noresahana Nandritra ny Adihevitra Momba Fifidianana Filoham-pirenena Fahatelo sady Farany i Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2012 11:32 GMT
*Raha hanaraka ny fitantarana teo aloha mikasika ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana, tsindrio eto sy eto [es].
Lynn University ao Boca Raton, Florida no nandray ny adihevitra fahetelo sady farany momba ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana eo amin'ny filoha Barack Obama sy ny Governoran'i Massachusetts teo aloha, Mitt Romney. Araka ny efa nampoizina, nifantoka momba ny politika ivelany ny adihevitra, indrindra ny mikasika an'i Shina sy ny Afovoany Atsinanana. Somary mahagaga, fa tamin'ny fankalazana ny faha-50 taona nitsingerenan'ny Krizin'ny Balafomanga Kiobana no notanterahana ny adihevitra, iray amin'ireo vanim-potoana sarotra indrindra teo amin'ny tantara politika ivelan'i Etazonia.
Narindran'ilay mpanao gazety matihanina ao amin'ny CBS, Bob Schieffer, ho i Romney no nanomboka ny adihevitra, izay nilaza fa raha izy no lasa filoha, dia ataony izay hitsipahan'ny tontolon'ny Islamika ny foto-kevitra fampihorohoroana miaraka amin'ny fanampian'ireo manam-pahaizana ao amin'ny faritra. Mikasika ny toe-draharaha ao Syria ohatra, nanambara i Obama sy Romney fa “tokony hiala” ny filoha Bashar al-Assad miaraka amin'ny fanohanan'i Torkia sy ny firenena namana hafa ao amin'ny faritra satria fantatra fa efa “tsy haharitra ela intsony izy.” Anisan'ny lohahevitra noresahana nandritra ny adihevitra ihany koa ny momba ny andraikitr'i Shina eo amin'ny toekarena sy ny fandriampahalemana ao Etazonia, ny fifandraisana manan-tantara amin'i Israely, ny tetikasa nokleary ao Iran, ny ady ao Afghanistan sy ny andraikitr'i Pakistan manoloana ny fipetrany ara-jeografika sy ny fananany fitaovam-piadiana nokleary.
Ny teboka tsara tsipihana tamin'ny adihevitra, araka ny filazan'ireo manam-pahaizana, dia ny fomba “namazivazian'i Obama ny foto-kevitr'i Romney mikasika ny politikany ivelany, indrindra mikasika ny fandaniana amin'ny miaramila. Nitsikera an'i Romney ny filoha noho ny filazany fa i Rosia no firenena fahavalo “laharana voalohany” ara-jeografika sy politika ary nampatsiahy azy fa efa 20 taona lasa no nifarana ny Ady Mangatsiaka. Ho valin'ny tsikera nataon'i Romney mikasika ny fampihenana ny isan'ny andian-tsambo miaramila (flotte militaire) raha oharina amin'ny fitantanana teo aloha, namaly izany i Obama ary nilaza fa tsy dia nandany fotoana firy i Romney handalinana ny fomba fiasan'ny miaramila, ary nampiany hoe mbola manana [ampiasaina] ny “soavaly sy antsy eo anoloan'ny basy (baïonette) vitsivitsy”, ampisaina raha ny marimarina kokoa ho amin'ny fiovan'ny paikady miaramila. Noresahina tao amin'ny Twitter ity tsikera farany ity tamin'ny alalan'ny tenifofotra #horsesandbayonets, izay lohahevitra faha-3 nalaza manerantany nandritra ny alin'io.
Na dia nilaza fohy momba an'i Amerika Latina aza i Romney fa faritra manana toekarena azo oharina amin'i Shina izy, tsy niresaka betsaka momba ny maha-zava-dehibe izany nandritra ny adihevitra izy. Mpisera Twitter maro no nanamarika izany, tahaka an'i Nicolás López Correa (@NicolasLopezCo) izay nilaza hoe:
@NicolasLopezCo: Kandidà iray ihany no niresaka momba an'i Amerika Latina nandritra ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana, ary i @MittRomney izany. Tandremo ry mpifindra monina Latino.
Diso fanantenana i Pedro Aranguren (@PedroAranguren) fa tsy mba noresahina ny fifandraisana eo amin'ny Etazonia sy Amerika Latina:
@PedroAranguren: Nampiseho ny adihevitra momba ny fifidianana Filoham-pirenena Amerikana fa tsy tafiditra amin'ny fandaharan'asan'izy ireo i Amerika Latina. Mijanona ho “tokontany ao ambadika” isika ho azy ireo.
Mpisera Twitter tahaka an'i Jose Luis Pedauga (@jlpedauga) naneho hevitra tahaka izany ihany koa:
@jlpedauga: Tsy noresahina nandritra ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena ao Etazonia i Amerika Latina http://dlvr.it/2MKvqX
Mitovy amin'izany ihany, Alejandro EC (@Alex_ec) nanamarika ny tsy firesahana an'i Meksika tao amin'ny adihevitra:
@Alex_ec: Na dia kely aza tsy noresahina i Meksika sy i Amerika Latina nandritra ny adihevitra fahatelo sady farany teo amin'ny Obama sy Romney, izany hoe… http://fb.me/xxChi7oQ
Nanamarika i Eugenio G. Martinez (@puzkas) fa tsy vaindohan-draharaha ny faritra raha resaka politika ivelany no resahina:
@puzkas: Mampiseho ny adihevitra fahatelo momba ny fifidianana filoham-pirenena ao Etazonia fa tsy vaindohan-draharaha ho an'i Etazonia i Amerika Latina (Venezoela-anisan'izany i Chávez)
Ny hafa tahaka an'i Juan Carlos Verdía (@VerdiaJ), nanamafy fa tokony handray tsara izay voalaza ny mponina ao Florida, izay nampiantrano ny adihevitra, :
@VerdiaJ: Kiobàna an'i #Miami, henoy tsara ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena http://goo.gl/Ju67D
Mpisera Twitter tahaka an'i Martín (@fragmentario) kosa nanamarika fa somary mifandrafy ny fandrenesana ny feo tamin'ny adihevitra:
@fragmentario: Ny adihevitra mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ao Etazonia no toerana tokana ahitana fikasana hamono olona tafiditra amin'ny CVn'ilay olona fa tsy any amin'ny tantaran'ny nitsaboana azy.
Nilaza i Manuel A. Merlo Mtz. (@ManuelMerloMtz) fa tsy dia niraharaha loatra ny lohahevitra momba ny fandaniana ara-miaramila ny adihevitra:
@ManuelMerloMtz: Tahaka ny TSY ZAVA-DEHIBE ny resaka momba ny fandaniana ara-miaramila nandritra ny fihainona ireo kandidà tamin'ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena …
Niadihevitra ny mpiserasera mikasika izay tokony ho jerena na ny fifanatrehana ara-politika na ny ara-panatanjahatena, tahaka ny tranga momba an'i Jennifer Torres P (@JenniferTorres6).
@JenniferTorres6: Safidy sarotra. Misafidy na hanaraka ny lalao St. Luis-San Francisco na ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena ao Etazonia
Minitra fohy taorian'ny fiafaran'ny adihevitra, nanamafy ny fanadihadiana sasany tahaka ny notontosain'ny CNN fa antsasany mahery tamin'ireo mpijery ny adihevitra no nilaza fa i Obama no nandresy. Tahak'izany ihany koa, nanamarika ny fahitalavitra CBS fa ny filoha ankehitriny no nandresy tamin'ny adihevitra farany alohan'ny fifidianana. Araka ny tarehimarika avy amin'ny CBS, vato 53% no azon'i Obama raha 23% kosa ho an'i Mitt Romney.